Waa maxay dib-u-maalgelinta amaahda Ardayga, sideese u shaqeysaa? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay dib-u-maalgelinta amaahda Ardayga, sideese u shaqeysaa?
isha sawirka: outlookindia
Dadka aan haysan kayd lacageed oo badan oo lagu hayo waxbarashadooda dugsiga sare ka dib, bixinta buugaagta, saadka iyo waxbaridda aad ayay u adag tahay sidaa awgeed, ardayda badankoodu waxay doortaan amaah arday.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr xaaladood, ardaydu waxaa laga yaabaa in ay awoodi waayaan in ay dib u bixiyaan deyntaas waqtigooda ama waxa laga yaabaa inay jecel yihiin inay yareeyaan dulsaarka deynta oo ay lacag kaydsadaan sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay doortaan.
DEYNTA DHAQAALAHA ARDAYGA.
Asal ahaan waxaad helaysaa deyn leh dulsaar yar si aad ugu celiso deyn leh dulsaar sare.
Ogsoonow in amaahda dib-u-maalgelinta ardayga inta badan la codsado si dib loogu bixiyo amaahda arday ee hadda jirta iyo in la dhimo heerka dulsaarka (ugu badnaan si lacag loo badbaadiyo) sida ardayda amaahda loo bixiyo oo shuruudo iyo siyaasado cusub laga hadlo.
Tusaale ahaan, qofka haysta $80,000 deyn arday ah si uu ugu bixiyo dulsaar ah 8%, waa inuu bixiyaa $972.62 bishiiba 10 ka sano ee soo socda. Haddii qofku awoodo inuu xaqiijiyo dib-u-maalgelinta amaahda amaahda ardayga iyo amaahda waxaa lagu bixiyaa dulsaar ah 5%.
Lacag bixinta bishiiba waxa la dhimi doonaa 848.52, si farxad leh ayaa loo badbaadin doonaa ku dhawaad ​​$15,000.
Akhri: Ardeyda Ugu Fiican Amaahda Dib -u -Celinta
5 FAA'IIDOOYINKA IYO KHASAARAHA DIB U MAALGELINTA DEYNTA ARDAYGA
Si looga fogaado khaladaadka iyo qoomamaynta, tallaabo kasta oo la qaadayo waa in si sax ah loo miisaamaa ka hor inta aan la go'aamin (gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha).
Haddii aad rabto in aad hesho arday si uu amaahda dib ugu soo celiyo, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka si aad u go'aamiso haddii deyntu ay ku habboon tahay shuruudahaaga ama rabitaannadaada.
Helitaanka heerka dulsaarka hoose si uu wax badan u badbaadiyo. Sababta ugu weyn ee ay dadku u tixgeliyaan dib-u-maalgelinta amaahda ardayga waa fursadda heerka dulsaarka hoose.
Inta badan ee aad u qalanto dib-u-maalgelinta, hoos ayay u dhici doontaa heerka dulsaarkaagu.
Waxaa laga yaabaa inaad hesho hal qorshe lacag-bixineed bishii, si ka duwan qaar ka mid ah deymaha ardayda federaalka oo ay tahay inaad bixiso dhowr dhibcood.
Waxaad dooran kartaa muddada cusub ee deyntaada oo ay ku jiraan tirada sanadaha loo isticmaalo bixinta deynta.
Way fududahay in laga fogaado lacagaha maqan sababtoo ah lacagaha la bixinayo bishii waxay ka yarayn karaan amaahdii hore. Sidaas ayaad awood u yeelanaysaa inaad ku dhisto buundada credit-kaaga.
Helitaanka amaahda dib-u-maalgelinta ardayga marka aad dhexda ku jirto ama aad ku dhowdahay bixinta daynta ardaydaada waxa laga yaabaa inay kordhiso wakhtiga ay qaadanayso in aad si buuxda u bixiso deyntaada.
Ogsoonow, dib-u-maalgelinta deymaha federaalka ee deyn-bixiye gaar ah waxay keeni kartaa in laga tanaasulo qaar ka mid ah mudnaanta lagu heli karo deymaha federaalka sida qorshooyinka dib-u-bixinta ee uu hoggaamiyo.
Waa inaad haysataa dhibco aad u wanaagsan oo aad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka qaarkood si aad ugu qalanto. Amaahiye kastaa uma qalmo dib-u-maalgelinta.
Qaar ka mid ah deyman bixiyayaasha gaarka ah kuma oggolaan doonaan inaad joojiso lacag bixinta sabab kasta. Amaah dib-u-maalgelinta waxaa loogu talagalay kuwa huba socodka dakhligooda oo aad ugu kalsoon inay si joogto ah u bixinayaan deymaha.
Awood la'aanta in la beddelo qorshaha lacag-bixinta. Amaah federaali ah, waxaad dib u eegi kartaa qorshahaaga lacag bixinta. Amaahda gaarka ah, ilaa aad dib u maalgeliso amaahdaada mar labaad, ma lihid ikhtiyaarkaas.
TALLAABOOYINKA LOO CODSADO DIB U MAALGELINTA DEYNTA ARDAYGA
Ka dib markii la miisaamay faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka dib-u-maalgelinta amaahda ardayga oo ay go'aansadaan in ay sii wadaan. Talaabooyinkani waxay ku tusayaan waxaad u baahan tahay inaad samayso si aad u hesho habraaca codsiga guulaysta.
Akhri: Amaahda Damiinka Shakhsiyeed
1. Samee cilmi-baaris ku saabsan shuruudaha amaahda iyo bixiyeyaasha:
Talaabada ugu horeysa ee aad qaadayso marka aad bilaabayso codsigaaga amaahda ardayga waa in la ogaado bixiyeyaasha bixiya amaahda amaahda ardayga iyo shuruudahooda.
Waxaa jira amaah-bixiyeyaal kala duwan oo ku siin kara dib-u-maalgelinta amaahda ardayga mid walbana wuxuu leeyahay shuruudahooda si kastaba ha ahaatee badankood waxay u baahan yihiin:
Dhibcaha credit wanaagsan ugu yaraan 650 iyo ka badan.
Macquul ah wax-ku-sameeyaha gaar ahaan haddii aad leedahay dhibco credit ganacsi oo xun ama cadaalad ah.
Dakhli joogto ah.
Bayaanada xaqiijinta amaahda ama bixinta.
Caddaynta qalin -jabinta.
Aqoonsi ay dawladdu bixisay iwm.
2. Codso qiyaasaha heerka amaahda:
Marka aad ogaatid shuruudaha deyn bixiye kasta oo aad awooddo inaad liis gareyso qaar, waxaad codsan kartaa heerka deynta ama waxaad booqan kartaa website-ka amaahiyaha si aad u aragto midka kugu habboon.
3. Go'aanso deymahaaga iyo qorshaha deynta:
Marka aad si guul leh wax uga weydiisatid oo aad qiyaasto heerarka daynta, tillaabada xigta waa in aad go'aansato dayn bixiye aad door bidayso.
Marka aad marayso qiimayaasha, siyaasadaha, iyo qorshaha dib u bixinta amaah bixiye kasta, waa in aad awooday in aad go'aan ka gaadho mida leh siyaasadaha ku jecel.
Marka taas laga soo tago, oo ka mid ah heerarka amaahda ee la qiimeeyay, waa in aad dooran kartaa qorshaha kuugu habboon. Si aad u badbaadiso lacag badan, dooro wakhtiga ugu gaaban ee lacag bixinta ee aad awoodid.
Haddii aad rabto lacag-bixinno bille ah oo hooseeya si aad u kala horraysiiso kharashyada kale, qaado wakhti lacag bixin oo dheer.
Heerarka dulsaarka go'an ayaa inta badan ah doorashada ugu fiican ee deyn-bixiyeyaasha intooda badan. Heerarka isbedbeddelaya ayaa laga yaabaa inay hooseeyaan marka hore, laakiin waxay masuul ka yihiin inay beddelaan bishii ama saddexdii biloodba mar.
4. Buuxi foomka codsigaaga:
Waxa xigta ee la sameeyo waxay noqon doontaa inaad diyaariso dukumentiyadaada oo aad buuxiso foomka codsiga.
Waxaa lagaa rabaa inaad soo rarto dukumeenti, sida bayaanka deyntaada, cadeynta dakhliga iyo kharashka guriyeynta bishiiba (kiro, mortgage, iwm.), Macluumaadka shakhsiyeed, oo ay ku jiraan faahfaahinta shaqada iyo waraaqaha lacag bixinta guryaha ee bilaha ah, iwm.
Ogow, waa inaad oggolaataa jeegaga deynta adag inta lagu jiro muddadan.
5. Marka codsiga la soo gudbiyo, waa inaad sii waddaa bixinta deynta ilaa laga oggolaado dib-u-dhaqaajinta deyntaada.
FAQS( SU'AALAHA INTA BADAN LA ISWAYDIIYO) EE DEYNTA DHAQAALAHA ARDAYGA
MAXAA DHACAYA HADDII AANAN SOO CELIN KARIN DEYNTA DHAQAALAHA EE ARDAYGA
Waqtiyadii ugu dambeeyay, cilmi-baaristu waxay muujisay in tirada deyn-bixiyeyaashu ay kordheen ilaa 20% taasina waa arrin aan fiicnayn. Xusuusnow in mid ka mid ah khaladaadka ugu xun ee aad samayn karto ay tahay inaad si fudud u doorato inaad iska indho tirto deyntaada.
Marka deyntaadu ay dhaafto 90 maalmood, waxay si rasmi ah u tahay "delinquent", waa ilaa 270 maalmood deyntaada ayaa la bixiyaa"
Marka xigta aad rabto inaad amaah cusub ka hesho meel kasta, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin, maadaama deyn bixintu ay hoos u dhigto deyntaada. Qiimaynta deymaha xun waxay kugu saameyneysaa dhowr siyaabood, maaha kaliya markaad rabto inaad hesho deyn kale.
Markaad shaqo codsanayso, loo-shaqeeyaha iman kara wuxuu go'aansan karaa inuu isticmaalo buundooyinka buundooyinka si uu u go'aamiyo kalsoonida iyo kartida ganacsi ee codsadayaasha shaqada. Dabcan, inaadan dib u bixin deyntaada oo ay la socoto credit credit waxay kaa dhigi doontaa inaad u ekaato qof aan aqbalin mas'uuliyadaha ama qaadin mas'uuliyadda ficilkiisa.
Xitaa bixiyaha adeegga taleefanka gacanta, waxaa laga yaabaa inuusan rabin inuu kuu oggolaado nooca heshiiska adeegga ee aad jeceshahay. Daynta xun waxay kugu saamaysaa siyaabo badan oo laga yaabo inaadan u malayn inay taasi yeeli doonto.
Faa'iidada deynta ardaygu waa, haddii aad si degdeg ah u bixiso, waxaad heli lahayd buundooyin buundooyin wanaagsan.
MAXAAN SAMAYNAYAA HADDII AANAN AWOODO IN AAN BIXIN KARAA DEYNTA DHAQANKA EE ARDAYGA.
Waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo aad codsan karto kuwaas oo hubin doona inaadan gelin wax dhibaato ah oo aadan awoodin inaad bixiso deyntaada. Arrimaha deyntaada waa la xallin karaa, si kastaba ha ahaatee, waa in la sameeyaa ka hor 270 maalmood, taas oo ah, marka xisaabtaada la bixin doono "in default".
Dhawr barnaamijyo federaal ah ayaa loo qaabeeyey si ay u caawiyaan, waxayna diyaar u yihiin dhammaan kuwa haysta amaahda ardayda federaalka, sida amaahda Stafford ama Grad Plus.
Qorsheyaal badan oo deyn cafis federaal ah ayaa diyaar u ah in laga codsado onlayn. U Bixi Sida Aad U Kasbato (PAYE), Lacag-bixinta Ku-salaysan Dakhliga (IBR), iyo Mushaharka Dib-u-habaynta Sida Aad Ku Kasbato (REPAYE) waa barnaamijyo kaa caawin kara dhimista lacagaha amaahda shahaado macquul ah oo ku salaysan dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga.
Waxa kale oo jira siyaabo kale oo dhowr ah oo loogu talagalay cafiska iyo dhimista deynta, gaar ahaan deymaha federaalka.
NOOCKEE AMAAH ah ayaa la ii ogolaan karaa in aan dib u soo celiyo
Amaah kasta waa in lagu qaataa magacaaga deyn-qaade ahaan, ha ahaato mid federaali ama mid gaar ah dib ayaa loo maalgelin karaa.
YAA AAN U ISTICMAALAA DEYNTA DIB U MAALINTA ARDAYGA.
Caadi ahaan, dabiicad-bixiyuhu waa qof oggolaaday inuu u istaago dammaanad qaade haddii aadan awoodin inaad bixiso deyntaada, isaga/iyada ayaa qaadaya mas'uuliyadda.
Marar badan, wax-soo-saare ayaa loo baahan yahay marka shaqsiga uu leeyahay buundada buundada liidata, uusan buuxin shuruudaha dakhliga ugu yar, uu leeyahay saami deyn-ilaa- dakhli oo sarreeya, iwm.
Marka aad soo gudbiso qaybta dalabka amaahiyaha, xidhiidhin ayaa loo soo dirayaa boostada wax-soo-saarkaaga si uu u buuxiyo qaybtiisa.
Qofka ugu wanagsan ee loo isticmaalo dabiicaddaada waa inuu noqdaa waalid la aamini karo, awoowe, mas'uul, saaxiib, ama qof kasta oo kale oo weyn oo la ammaano oo raba inuu kula qaato mas'uuliyadda sharci ee deymaha deynta.
Isku-duwaha aad dooran lahayd waa inuu lahaadaa dhibco wanaagsan, dakhli joogto ah, iyo dabeecad la isku halayn karo. Ogsoonow, xisaabiye ma aha lagama maarmaan haddii aad leedahay credit taagan oo wanaagsan.
Shuruuda ugu weyn ee amaahda dib-u-maalgelinta ardaygu waa buundada credit-ka wanaagsan. Haddii aad ka hoos timaado heerka buundooyinka buundooyinka "cadaala" ama " liidata ", waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad ogaato ilaha amaahda amaahda ardayga ee ku siin kara amaah (in kasta oo aad u badan tahay inaadan helin shuruudo wanaagsan).
Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad ka fiirsato inaad hesho alaab-qeybiyaha maadaama bixiyeyaasha qaarkood ay door bidaan inaad la soo baxdo wax iibiye.
Marka laga reebo qiimeynta faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka amaahda dib-u-maalgelinta ardayga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isweydiiso 5-tan su'aalood si aad u go'aamiso haddii deynta dib-u-maalgelinta ardaydu ay tahay adiga,
Waa maxay ujeeddada aan u leeyahay dib-u-maalgelinta deymaha ardaygayga?
Dhibcahaygu ma ku adag yihiin amaahda dib-u-maalgelinta ardayga?
Intee ayaan awoodi karaa in aan bixiyo bishii iyo waa maxay heerka dulsaarka ee diyaar ii ah?
Mar haddii, aan luminayo fursadaha federaaliga ah dib-u-maalgelinta, miyaan u baahanahay dib-u-bixinta amaahda ardayda federaaliga ah hadhow?
Ma awoodi doonaa in aan dib u bixiyo deyntayda?
Markaad awoodo inaad su'aalahan uga jawaabto gudahaaga si ku qanacsan, waxaad ogaan lahayd haddii dib-u-dhaqaajinta amaahda ardaygu adiga kugu habboon tahay.
20 Shaqooyin oo Bixiya $ 30 Saacad 2022 | Lacag Caddaan ah
Faallooyinka Pockbox 2021: Sida ay u Shaqeyso | Sharci ama Fadeexad
Dib u eegista alaabta sida Pockbox marna lama dhayalsan karo. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in 84% dadku aaminaan faallooyinka khadka tooska ah…
Dib u bixinta deynta ardaygaaga waa inay ahaato mid aan dhib lahayn. Si kastaba ha noqotee, gadaalku waa kiiska markaad tahay…